Ahoana ny fanitsiana ny famirapiratan'ny efijery ho azy | Ubunlog
Ahoana ny fanitsiana ny famirapiratry ny efijery ho azy
Iray amin'ireo zavatra nahazatra anay nisaotra fitaovana finday fa ampifanaraho ho azy ny famirapiratan'ny efijery misy antsika mampifanaraka izany amin'ny fepetra manan-kery amin'ny fotoana rehetra; Izany dia ny fampitomboana ny famirapiratana rehefa misy jiro manodidina (ohatra amin'ny mitataovovonana) ary mampihena azy rehefa tonga ny alina, zavatra iray izay manana fifandraisana ara-pahasalamana aza satria voaporofo fa amin'ny ora alohan'ny hatory dia tsy tsara fa 'manome' hazavana be ny écran.
Ny olana amin'ity rehetra ity dia na dia mamela antsika hanara-maso aza ny mpanara-maso sy ny efijery finday amboary ny hamafin'ny jiro fampisehoana, tsy manolotra fomba fanaovana azy ho azy izy ireo tahaka ny ataon'izy ireo amin'ny finday (takelaka sy finday finday). Saingy azonao atao, milamina izay azonao atao, ary amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fanitsiana ny famirapiratry ny efijery mandeha ho azy Ubuntu, misaotra fitaovana iray nantsoina Wildguppy.
Podemos apetraho WildGuppy avy amin'ny toerana anafenana PPA ofisialy, izay ahitantsika ilay kinova mifanentana amin'ny Ubuntu 12.04, 12.10, 13.04, 13.10 ary 14.04 LTS. Ka, araka ny fantatsika tsara, ny asa dia tena tsotra, toy ny fanatanterahana ireto manaraka ireto avy amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T):
sudo apt-mahazo mametraka wildguppy
Amin'ny tranga fampiasana Ubuntu 14.10 na avo kokoa Tsy maintsy ampidino ny fonosana .deb ary apetaho amin'ny tanana. Amin'ity tranga ity dia afaka manokatra varavarankely misy terminal ihany koa isika ary manatanteraka:
Afaka isika izao manomboka WildGuppy, ary noho izany dia afaka manomboka manoratra ny anaranao ao amin'ny Dash of Unity, na mazava ho azy fa afaka manao izany amin'ny menio na launcher ampiasaintsika isika, amin'ny iray amin'ireo safidy maro atolotry ny GNU / Linux antsika foana. Vita izay dia hitantsika izany WildGuppy dia mihazakazaka avy eo amin'ny faritra misy ny rafitra, izany hoe ilay iray ananantsika ireo mari-pamantarana feo, ny fihenan'ny bateria sy ny hafa.
Io famantarana WildGuppy io no hamela antsika fehezo ny safidin'ny hazavana rehetra, izay manondro ny famaritana azy amin'ny tanana na ny fisafidianana ny hamela ny fampiharana hikarakara ny zava-drehetra, izay amin'ny farany dia ny hevitra (na dia azontsika atao aza ny manondro ny elanelam-potoana izay havaozina ny fanamafisana, ary ny famirapiratan'ny sanda farany ambony sy kely indrindra).
Ankehitriny, ny fampiharana an'io karazana io dia mahasoa kokoa rehefa mihazakazaka azy isika tsy hoe ho azy fotsiny fa koa amin'ny alàlan'ny default, izany hoe isaky ny manomboka ny solosaina. Ary noho izany dia tsy maintsy mametraka ny tanantsika hamorona rakitra isika, izay tsy maintsy jerentsika ao anaty lahatahiry ./config/autostart avy amin'ny lahatahiry manokana. Azontsika atao ny mampiasa ny tonian-dahatsoratray tiany, raha amiko gedit:
Avy eo, ampidirinay ao anaty fisie ireto atiny manaraka ireto:
Afenina = diso
NoDisplay = diso
X-GNOME-Autostart-mandeha = marina
Anarana = WildGuppy
Izay no izy, ary manomboka izao isaky ny manomboka ny ekipanay Ubuntu isika dia hanana WildGuppy amin'ny alàlan'ny default, miaraka amin'ny tombony rehetra azo atao amin'ny fitantanana ny famirapiratry ny efijery ho azy. Ary tsy tokony hataontsika ambanin-javatra izany ambonin'ny zava-drehetra, hahazo fampiononana bebe kokoa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fanitsiana ny famirapiratry ny efijery ho azy
Ahoana ny fanamboarana ny lesoka "W: GPG error"
Ahoana ny fametrahana ny menio Ubuntu taloha ao amin'ny Unity